Bale oo ku sii jeeda Manchester United iyo Caqab durba soo shaac baxday – Daily Som
Wariryahan Kooxda Real Madrid iyo xilka Wales ayaa la sheegaya in uu ka sii socda koorada asiga oo ku biiraya Kooxda Manchester United ee Dalka England.
wargayska Daily mail ayaa sheegaya in xida uga ciyaara Real Mardir garabka in uu doonayo in uu kooxda, 28 jirkaan ayaana ku faraxsanayn sii joogistaSpain iyo kooxdiisa waxaana loo samabaynayaa Boos joogta ah oo uusan haysan iyo sida uu markii kooxda muhiim ugu ahaa oo uusan hada muhiim u ahayn.
waxaasa jirta hal Caqabad oo unbaahan xalis sida lagu soo warinayo oo ka imaanaysa wakiil bale, wakiilka bale oo sidoo kale ah Nin wakiil u ah Ciyaariyahanka Gadoodka ah ee Shaw, ayaa la filayaa in uu ku xumeeyo Mourinho simaadaama uu si xun ula dhaqmay xida ka cayaara garabka Bidix ee daafaca.
22 jirka daafaca uga ciyaara United daafaca uga Ciyaara ayaa la filayaa in uu ka tago kooxda marka uu suuqa furmo, wakiilka Bale iyo shaw ayaana la aamin sanyahay in uu saamayn ku yeelan doono keenista bale ee old trafford.
Bale oo ku sii jeeda Manchester United iyo Caqab durba soo shaac baxday added by Staff on March 24, 2018